फाट्टफुट्ट चल्छ यातायात - Khabar Page
फाट्टफुट्ट चल्छ यातायात
खबर पेज १० श्रावण २०७७, शनिबार ११:०५ मा प्रकाशित
विदुर । यातायात व्यवसायी र मजदूर सङ्गठनले निर्णय गरेर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरे पनि नुवाकोटमा न्यून संख्यामा मात्रै सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् ।
यस्ता सवारी साधनमा यात्रु भने कमै मात्रमा चढ्ने गरेका छन् । केही व्यवसायीले गत सातादेखि नै सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेकामा बुधबारदेखि बन्दाबन्दी अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सडकमा चाप केही बढेको थियो । त्यसमा व्यवसायी र मजदूर सङ्गठनले बिहीबारदेखि सवारी साधन सञ्चालन गर्न थाले पनि त्यो चाप थोरै बढेको छ ।
आमनागरिकले सोचेजस्तै ह्वात्तै सडक व्यस्त भने भइसकेको छैन । नुवाकोटको बिभिन्न स्थानबाट सार्बजानिक सबारी सञ्चालन भएता पनी यात्रुहरुको चाप कम रहेको सबारी चालकहरुले बताएका छन् ।
सडकमा गुडिरहेका बस, माइक्रो लगायतका सवारी साधनमध्ये अधिकांशमा आधाभन्दा कम मात्रै यात्रु चढ्ने गरेका छन् । अधिकांश सवारी साधनमा स्वास्थ्यको प्रटोकल अनुसार मापदण्ड पालना गरि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । छोटो तथा जिल्ला भित्र सञ्चालन भएका अधिकांश सबारीसाधन चढ्ने भन्दा पैदल हिडेरै आफ्नो गन्तब्यमा पुग्ने नागरिकहरुको संख्या धेरै रहेको छ ।
सार्बजानिक सबारीमा चढ्ने नागरिकहरुको संख्यामा कमी आए पनि निजी सबारीको ओहोर दोहोर भने बाक्लिएको छ । लकडाउन पुर्ण रुपमा खोलेको घोषणसँगै निजी सबारीहरुको चाप बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ रोकथामका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा नअपनाउने चालक सहचालकलाई ‘होल्ड’ मा लिने समेत प्रहरीले जनाएको छ । स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउने सवारी साधनलाई दिनभर होल्ड गराएर साँझ मात्रै छाड्ने नीति लिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
१० श्रावण २०७७, शनिबार ११:०५
विदुरमा पनि बिद्युतिय बस सञ्चालको तयारी
विदुर । वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले इन्धनबाट सञ्चालित सवारीलाई विस्थापित गरी विद्युतीय बस…
मास्क नलगाउने ६५ जना फेरि कारबाहीमा
विदुर । विश्व महामारी कोभिड–१९ नियन्त्रण र यससंग सम्वन्धि गतिविधिहरुमा नुवाकोट प्रहरीको सक्रियता फेरि बढेको…
कोरोनाको नाउमा भएको खर्चको एक-एक हिसाब आउने
नुवाकोट । विश्वमहामारी कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि नुवाकोटमा भइरहेको र भईसकेको खर्चको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने…
छ गुणा बढी बस भाडा
विदुर । सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने सार्वजनिक यातायातका साधन नुवाकोटमा कारबाही पर्न थालेको छ…
भाडापनि दोब्बर, यात्रु पनि दोब्बर
नुवाकोट । कोभिड–१९ संक्रमण फैलन नदिनका लागि सरकराले सार्वजनिक यातायातका साधनमा दुरी कायम गरेर यात्रुहरुलाई…
यो के तरिका हो ह ?
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउन हिजो रातीबाट अन्त्य भएको छ । केही दिनदेखि…
अब नुुवाकोटमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्दा हुन्छ ?
सुरु भयो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन
विश्व महामारी कोभिड–१९ (नोबेल कोरोना भाइरस) नियन्त्रणका लागि भएको बन्दाबन्दीपछि १११ दिनमा नुवाकोटमा छोटो दुरीका…